भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने जिउँदो दाहिने शंख, फोटोमा छोएर ॐ लेखी १ शेयर गर्नुहोस् ७ दिन भित्र तपाईको भाग्य बद्लिनेछ - Kohalpur Trends
भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने जिउँदो दाहिने शंख, फोटोमा छोएर ॐ लेखी १ शेयर गर्नुहोस् ७ दिन भित्र तपाईको भाग्य बद्लिनेछ
trendsminad November 22, 2020	No Comments
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो।
यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ।जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ।
धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ ।
विषयसूची [लुकाउने] १ किसिम२ हिन्दू धर्ममा प्रयोग३ औषधीका रूपमा प्रयोग४ सन्दर्भकिसिम[सम्पादन गर्ने]शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ । लाखौं शंखमा दाहिना शंख एउटा पाइन्छ ।
हिन्दू धर्ममा प्रयोग[सम्पादन गर्ने]रामायण, महाभारतमा शंखको महिमा प्रसस्त छ भने हाम्रो समाजमा मंगल कार्यदेखि मृत्युजन्य शोकको घडीमा समेत शंखवादनलाई महत्त्व दिइन्छ ।
शंख बजाउँदा त्यसको ध्वनिले विभिन्न प्रकारका रोगाणु र विषाणुलाई मार्ने वर्णन ऋग्वेदमा छ ।
शंख महाभारतमा वर्णित एक राजा विराटको एक पुत्रको नाम पनि थियो। यो हिन्दु धर्ममा अति पवित्र मानिन्छ। यो धर्मको प्रतीक मानिन्छ। यो भगवान विष्णुको दायाँ माथिल्लो हातमा शोभायमान देखिन्छ। बिहान र बेलुकी आरती गर्दा शंख बजाइन्छ ।
पूजापाठ सुरू गर्दा र सकिने बेलामा पनि शंख बजाइन्छ । कतिपय जातिमा मुर्दालाई घाट लैजाँदा शंख बजाउने चलन छ ।
औषधीका रूपमा प्रयोग[सम्पादन गर्ने]आयुर्वेद उपचारमा शंख भस्मको ठूलो महत्त्व छ । शंख भस्म बनाउन शंखलाई माटोको भाँडोमा राखेर पाँच/छ फिट गहिरो खाल्डोमा गुइँठाले पोलेर निकाली घ्यूकुमारीको रसमा पिन्नु पर्छ ।
यसमा क्याल्सियम, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेसियम आदि तत्त्व प्रसस्त पाइन्छन् ।
The submit भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने जिउँदो दाहिने शंख, फोटोमा छोएर ॐ लेखी १ शेयर गर्नुहोस् ७ दिन भित्र तपाईको भाग्य बद्लिनेछ appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: सरकार हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ : भीम रावल
Next Next post: जे मागेपनि पूरा हुने नेपालको अ’नौठा र अ’त्यन्तै श’क्तिशाली मन्दिर दर्शन स्वरूप १ शेयर गर्नुहोला !!!!